Mpampita vaovao tsy marina no nanoratany an'i Nu.nl miaraka amin'ireo tantara momba ny coronavirus sy lohateny sandoka: Martin Vrijland
Mpanangom-baovao sandoka Nu.nl mihazakazaka miaraka amin'ny tantaran'ny coronavirus sy lohateny sandoka
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 Aprily 2020	• 13 Comments
"Fa maninona ny mpitsikera holandey dia manome tsiny an'i Bill Gates ho an'ny corona," no lohatenin'io lahatsoratra oe.nl izay no nanaovan'izy ireo fanandramana faharoa hahitana ilay vondrona nifoha tsy mitsaha-mitombo. Ny zava-misy napetrany dia mampiseho fa manomboka mifoha i Holandy dia manomboka mandrahona ny fahefana.
Ao anatin'ity lahatsoratra ity izy ireo dia mampifandray ny olona amiko amin'ny karazana haino aman-jery hafa voafehy izay ambarako. Nandritra ny fotoana ela dia tsy niraharaha ahy tanteraka ny haino aman-jery tsy miankina, fa ankehitriny, mihamitombo be ny tranokalako, izao izy ireo avy eo dia mandefa zavatra ary tsy ela taty aoriana i Nu.nl dia misy lahatsoratra iray mametraka ahy ho mpanaparitaka vaovao sandoka. Hitanao tsara fa miasa eo ambanin'ny satroka izy ireo.
Tsia, tsy manome tsiny ny Corona amin'ny vavahady aho! Izay no hevitry ny tsikombakomba ao aminy Nu.nl! Raha ny tena izy dia lainga Nu.nl!
Eto amin'ity tranokala ity dia ny fampiasam-bola marobe izay nataon'i Bill Gates amin'ny famolavolana vaksiny isan-karazany sy orinasa mpanamboatra no nasongadiny. Ireo dia zava-misy sarotra azo zahana amin'ny tsirairay ary tsy mila 'Ministeran'ny Nu.nl fahamarinana »amin'izany.
Avy eo izy ireo dia manondro lahatsoratra iray tamin'ny Janoary - saika tamin'ny fiandohan'ny krizy corona - izay nanehoako patanty avy amin'ny Institut Pirbright. Ao anatin'io lahatsoratra io aho dia manazava fa maro ny vaksiny coronavirus no miangona ary i Bill Gates dia toa mpamatsy vola ao ambadik'izany ivontoerana izany.
Coronaviruses dia (koa) natsangana tamin'ny laboratoara. Zava-misy izany. Ny Paténi no mijanona eo. Manao izany izy ireo hananganana vaksiny. Tsy midika izany fa ny coronavirus covid-19 ankehitriny dia dikan-tsarimihetsika-tariby. Tsy midika izany fa ny Pirbright Institute na i Bill Gates no tompon'andraikitra amin'ny fivoahan'ny Covid-19. Tsy nilaza an'izany aho ary tsy afaka milaza izany, satria tsy misy porofo momba izany. Mety manontany tena ianao.
Ny zavatra ataoko dia mametraka fanontaniana manakiana. Ary tsy maintsy. Mila manontany tena foana ianao.
Ohatra iray amin'ny fanontaniana manakiana tena ny fomba nivoaran'ny covid-19. Virus voajanahary vetaveta, virus na laboratoara voaroaka na virus na marika? Ohatra iray hafa amin'ny fanontaniana iray ny hoe tena tafiditra ao amin'ny vatan'olombelona (jereo eto).
Te-hamorona karazana George Orwell 1984 'Minisiteran'ny Fahamarinana' ny oniversite toa an'i Nu.nl izay tokony hanafoana ny eritreritra rehetra ary toa miezaka ny hiantoka fa tsy afaka manaraka ny fahamarinana iray fotsiny ny olona: ny fahamarinan'ny fanjakana sy ny 'manam-pahaizana'. Midika izany fa tsy afaka mametraka fanontaniana manakiana intsony ianao. Azonao atao ihany ny mihaino ireo "manampahaizana manam-pahaizana". Izany no mandeha.
In lahatsoratra tamin'ny 28 Janoary Notsipihako fa i Bill Gates dia nilaza tamin'ny taona 2017 fa ny valan'aretina manaraka dia mety ho natao marika eo amin'ny efijery finday.
Raha miankina amin'ny Nu.nl dia mety tsy hifandray intsony isika. Izany no atao hoe "fisainana tsikombakomba". Mila manidy sy hitelina izay rehetra tian'ny media aminao ianao. Raha tsy izany dia manana hadisoana ianao na mpikomy manohitra (manana aretina EYE ianao). Tsia, tsia! Tsy maintsy manao izany ny olona tsara tazomy ho anao izany! Tsy maintsy manao izany ny olona tsara mametraha fanontaniana manakiana. Zo lehibe iray lehibe izany.
Amin'ny fotoana izay nanjary manan-jo hametraka fanontaniana manakiana, miaina eo ambanin'ny fitondrana tsy refesi-mandidy izahay.
Tian'i Nu.nl ny fampidiran-draha toy izany, satria ny tsikera rehetra dia esorina ho "teôlôpatika". Ny tsikerako dia mifandray amin'ny tranonkala media hafa voafehy (izay ao am-paosin'ny fanjakana satria lany bala am-panaovana azy hanao zavatra hafa amin'ny fomba hafa.
Ka mitombina ny miresaka momba an'i Bill Gates. Tsy tokony hanontany tena ve ianao hoe maninona ny olona lasa miliardio ary manala ny resaka momba ny hetra momba ny fampihenan'ny mponina amin'ny vaksiny? Tsy tokony hanontany tena ve ianao hoe maninona no misy mamatsy vola an'ireo orinasa vaksiny rehetra ireo; fa maninona no misy olona manana fangatahana patanty fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny atidohanao nataony? Tsy mahazo manontany tena ve ianao raha misy ny fandaharan'asa ao ambadika?
Tsy tokony hahazo naoty kely fotsiny izany! Koa raha manana miliara kely tampoka ao amin'ny kaontiko rahampitso aho, ny haino aman-jery sy ny politika rehetra dia efa eto an-tsaiko ary tsy azo ekena ny fanontaniana manakiana? Eny, toa marina ny filazalazana raha ny momba an'i Bill Gates.
Ao amin'ny firenena malalaka, tsy maintsy manohy mametraka fanontaniana isika. Ao amin'ny firenena malalaka, dia tsy maintsy manakiana mafy ny manankarena izao tontolo izao isika. Ao amin'ny firenena malalaka, tsy tokony hotarihin'ny media isika izay ao am-paosin'ireo mpanan-karena ireo.
Nu.nl dia amidy be ao am-paosin'ny vola be. Ny fanoherana rehetra dia esorina ary mijoro izany tafika media sosialy mameno ny valiny. Izay rehetra milaza zavatra tsy manavao ny tantarany dia esorina, toa ny valin-teniko momba ny lahatsoratra.
Manala baraka anao Nu.nl!
Microsoft patent 2020-060606 mampifandray ny atidohan'olombelona amin'ny rafitra fandoavam-bola crypto
Ny tranonkala nepnieuws-checker.nl dia hanodina ny ampihimamba amin'ny fanjakana amin'ny fomba fijerinao manerantany
Tags: Bill, manamarina, taratasim-bola, pananahana, fanotrehan'ny, tetikady fikomiana, Corona, krizy corona, Coronavirus, Gates, Institute, Martin, asa fanompoana, nu, nu.nl, patanty, Pirbrght, Pirbright, vaksiny, vaksiny, dia, firenena malalaka, fahamarinana
24 Aprily 2020 ao amin'ny 09: 18
24 Aprily 2020 ao amin'ny 09: 46
Holandy, tanin'ny tsiambaratelo, tsiambaratelo maro
ary aiza no ahafahan'ny 'mpiasa miasa tsara' manafina tsara ny tsiambaratelo. Mety ho an'ny jadona mangina sy malefaka.
24 Aprily 2020 ao amin'ny 10: 10
Vakio ireo fanamarihana eto amin'ity lahatsoratra NU.nl ity (izay miaraka amin'ny NU.nl) mahaliana kokoa noho ny lahatsoratra. Raha mamaky fanehoan-kevitra marobe eo ambanin'io lahatsoratra io ianao dia afaka hitanao mazava tsara fa (ny ampahany betsaka amin'ireny) ireo fanehoan-kevitra ireo dia navoakan'ny olona nokaramaina ary ny olona nanakarama azy (na ny olona mitovy amin'io amin'ny kaonty hafa). voahetsika ireo fanehoan-kevitra ireo. Manjary miharihary raha toa ka manao izany mandritra ny fotoana maharitra ianao miaraka amin'ireo lahatsoratra 'fiakarana' manan-danja amin'ny tranonkala toy izany, tsy ho ela ianao dia hahita fomba miharihary amin'ny fisehoan-kevitra (matetika mankatoa ary somary miitatra kely momba an'io raharaha io).
Mifohaza 36 nanoratra hoe:
24 Aprily 2020 ao amin'ny 13: 13
Eny, marina izany, voamariko koa fa misy Internet troll mavitrika etsy sy eroa. Napetrako avy hatrany izy ireo! Avelao ny tenany ho voafitaka amin'ny lahatsary iray fa handresy ihany izy ireo ary hoentina daholo ny drafitra rehetra. Ny olom-pirenena tsotra dia tsy hilaza an'izany mihitsy. Inona no drafitra?
Amin'ny instagram izy ireo dia manipy miaraka amin'ny mpikirakira tsikombakomba na geek mpiray tsikombakomba.
Mampalahelo amin'ny MSM fa toa tsy misy dikany loatra ny miasa amin'ny trolls. Raha ny fantatra dia mbola matahotra ihany izy ireo fa hiseho ny fahamarinana ary toa manana ampy hanafina izy ireo raha tsy izany dia tsy hanao tolona toy izany izy ireo. Izy io dia manamafy antsika hatrany hanohizana ny vahoaka!
24 Aprily 2020 ao amin'ny 16: 27
Azonao atao ny milaza fa mitovy amin'ny governemanta ny MSM! Indraindray dia mody tsy manaiky ny governemanta ny vahoaka. Izany dia natao ho fanelingelenana, famoronana fisavorovoroana ary hahazoana vola. Satria izany no tiany. Tena misy ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny serivisy fitsikilovana amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy ny fitarihana ny fitondran'ny mponina amin'ny alàlan'ny valiny, sns. Ity dia miaraka amin'ny drafitra iray tsy misy atsy ho atsy. Avelao hivezivezy ny ankizilahy, ny andevo tia an'i Ze. Ankoatr'izay, ny andevo antonony dia iq ambany dia ambany, ny tena velona iq.
24 Aprily 2020 ao amin'ny 16: 01
25 Aprily 2020 ao amin'ny 00: 36
azonao antoka fa tsy misy zavatra ratsy ananan'i Fritsie, afatory fotsiny ny ankihintsanana
Tsy maintsy misy fikambanana krizy foibe tarihin'i Defense hiatrehana ny krizy amin'ny corona. Ny ‘Center Command National’ toy izany dia tsy maintsy omena hery manjaka lavitra.
ps: I Leiden no fototry ny Minerva
25 Aprily 2020 ao amin'ny 19: 00
toy ny hoe mbola tsy manana anjara toerana tena izy amin'ity opération corvid19 ity, ny lesoka cello dia ohatra iray ho an'ny fiaraha-monina megalomaniac.
24 Aprily 2020 ao amin'ny 16: 21
adala mihitsy raha tokony hihaino tarehimarika iray isika, nefa tsy misy fahalalana na fahalalana. Ilaina kokoa ny mahita hoe iza izy no misolo azy.
24 Aprily 2020 ao amin'ny 21: 32
Eto dia manomboka ny oram-panala miadana efa amin'ny renim-pianakaviana, tsy misy hafa amin'izany. Ny fomba / sandam-bola dizitaly.
26 Aprily 2020 ao amin'ny 11: 03
Fanafihana dia fiarovana tsara indrindra
2 May 2020 amin'ny 13: 39
Angamba izay no tokony hanao ny asa fanaovan-gazety momba ny fanaovan-gazety, oh tsia, fa tsy izany no tanjon'izy ireo
Ireo Models Cousse modely
Modely roa lehibe no ampiasaina any Andrefana nanomboka ny fampielezana ny coronavirus ho any Eropa sy Etazonia mba “haminavina” ary hamaly ny fihanaky ny aretina COVID-19. Ny iray dia novolavolaina tao amin'ny Imperial College of London. Ny faharoa dia novolavolaina, izay nasiana fanamafisana ny vokatra amerikanina, nataon'ny University of Washington's Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) tao Seattle, akaikin'ny tranon'i Bill Gates mpanorina ny Microsoft. Ny fantatsika dia ny hoe samy manana ny fisian'ny famatsiambola ara-bola amin'ny alàlan'ny fanadiovana hetra miorina ny vondron'olona roa izay mamatsy vola an-tapitrisany amin'ny vaksiny voarindra sy fanafody hafa hitsaboana coronavirus - The Bill and Melinda Gates Foundation.
Neil Ferguson sy ny antokony modely ao amin'ny Imperial College, ankoatry ny tohanan'ny OMS, dia mandray an-tapitrisany avy amin'ny Bill & Melinda Gates Foundation. Ferguson dia nitarika ny Consortium Modelling amin'ny vaksiny Vaccine Impact ao amin'ny Imperial College izay manisa ho mpamatsy vola azy ny Bill & Melinda Gates Foundation ary ny GAVI izay tohanan'ny vaksiny. Nanomboka tamin'ny taona 2006 ka hatramin'ny 2018 dia namatsy vola $ 184,872,226.99 ho an'ny fakan-tsaratr'i Imperial College ao Ferguson ny Gates Foundation.
Tsara homarihina fa ny fototra Gates dia nanomboka nandatsaka an-tapitrisany tao amin'ny fampodiana modely Ferguson taorian'ny nahafantarana ny tsy fahampian'ny fahitsiana azy, izay nahatonga ny sasany nilaza fa i Ferguson dia asa iray hafa noho ny siansa "science for up".
22 May 2020 amin'ny 17: 52
Ny suspect taloha dia mivoaka avy amin'ny masse, manomboka vetivety ve ny volony eo ambanin'ny tongotra?
« Ny fakan-tsarin'ny Luxand izay mahita ny saron-tava no hiseho amin'ny (coronavirus)
"Fitehirizam-baravarana ho an'ny mpiasan'ny birao sy ny bonus ho an'ny taratasinao", der Führer »
Total fitsidihana: 2.437.557
Tsy afaka miditra ao amin'ny fivarotana intsony ianao raha tsy manome ny anaranao sy ny laharan'ny andevo ao amin'ny counter na dia vao manomboka fotsiny izany
Ny hazondamosin'i Trump manoloana an'i Shina ve ny fiandohan'ny fahalavoan'ny dolara sy ny fianjeran'ny toekarena?
Avereno mivantana ny demokrasia ny lalana fohy noho ny fanakatonana sy ny fanarenana ny toe-karena
Sephus op I Maurice de Hond dia mahita ilay valiny tsy misy dikany (video) iray metatra sy sasany
Camera 2 op I Maurice de Hond dia mahita ilay valiny tsy misy dikany (video) iray metatra sy sasany
Fakafakao op Firifiry ny Holandey no mbola afaka mandoa ny volany mandritry ny krizy corona?
Riffian op Tokony alainao ve na mandà ny vaksiny Covid-19 raha toa ka voatery mandoa? Ny hatao?